macruufka 14: dhammaan wararka aan ognahay - iPhone News | Wararka IPhone
macruufka 14 beddeli doonaa macruufka 13, nooca ugu dambeeyay ee nidaamka hawlgalka Apple. Waxaa la filayaa inay noqoto la soo bandhigay bishii Juun 2020, inkasta oo ilaa iyo hadda aysan jirin xaqiijin rasmi ah.
Marka la eego iswaafajinta aaladda, waxaa lagu rakibi karaa dhammaan kuwa awooda inay cusboonaysiiyaan macruufka 13. Sidaa darteed, heerka ka-saaristu wuu yaraan lahaa.
Waxyaabaha cusub, waxaan rajeyneynaa:
App jimicsi cusub, oo leh jimicsiyo iyo fiidiyowyo kaa caawinaya inaad ku noolaato nolol caafimaad leh. Waqtigan xaadirka ah ma jiraan wax tilmaam ah oo muujinaya in codsigan la bixiyay, markaa waxaan rajeyneynaa in isticmaalkeedu u bilaash u yahay dhammaan isticmaaleyaasha.
Hawlaha cusub ee Farriimaha, taas waxaa ku jiri lahaa suurtagalnimada in la xuso isticmaaleyaasha kale (@user) iyo tirtirka farriimaha horey loo soo diray.
Waqtigaan la joogo macluumaad yar ayaa ka jira, laakiin waxaan kula socodsiin doonnaa horumarka ugu dambeeyay ee wararka aad hoos ku arki karto.
Toddobaadkii hore, Apple waxay ku dhawaaqday inay joojisay cusboonaysiinta iOS 14 taasoo la yaab leh mid kasta iyo mid kasta…
by Qolka Ignatius samee Bilaha 7 .
Maalin kadib markii la siidaayay iOS 15.1 iyo iPadOS 15.1, nimanka Cupertino ayaa soo saaray cusboonaysiin cusub…
IPhone-ka noocyadiisii ​​hore, gaar ahaan iPhone 12 iyo iPhone 11, wuxuu soo bandhigay dhibaatooyin halis ah oo madaxbannaanida ...
Sida caadiga ah, Apple waxay raacaysaa borotokoolka si loo joojiyo saxeexa qoraalkii hore ee ...
by Jordi Gimenez samee Bilaha 8 .
Dhowr saacadood ka hor ayaa la sii daayay noocyadii ugu dambeeyay ee macruufka 14.8, iPadOS 14.8, watchOS 7.6.2 iyo macOS Big ...
Noocyada softiweerka Apple ee aaladooda waxay sii wadaan inay isku beddelaan isbeddelo joogto ah iyo waxa maanta ...
Ragga ka yimid Cupertino ayaa sii daayay macruufka 14.7.1 usbuucii hore, noocaas oo ku dhowaad dhammaan suuragalnimada noqon doona kii ugu dambeeyay ...
by Miguel Hernández samee Bilaha 10 .
Imaatinka macruufka 15 wuu soo dhowaanayaa oo wuu soo dhowaanayaa, sidaa darteed ma lihin wax aan ka ahayn ...
Dad badan oo adeegsadayaal ah, oo aan ku jiro aniga, macruufka 14.6 wuxuu u ahaa madax xanuun dhab ah oo ku saabsan ...
by Tony Cortes samee Bilaha 10 .
Apple si dhakhso leh ayuu u hagaajiyay cilladaha furaha Apple Watch. Kaliya waxay qaadatay toddobaad in ...
by Angel Gonzalez samee Bilaha 10 .
Dhowr maalmood ka hor Apple ayaa sii daayay ka dib shan nooc oo beta ah iPadOS iyo iOS 14.7 oo loogu talagalay qalabka la jaan qaada. Betas la daabacay ...